Ahoana no mba hahazo ny zom-pirenena ao Tiorkia - Fianarana any Eoropa andrefana - Ny mpisolovava ny Philippines! Filipiana mpisolovava, an-tserasera rehetra.
Haka ny zom-pirenena tiorka tamin'ny fomba maro
Torkia dia tena malaza amin'ny Rosiana ho toy ny toerana mba hiala sasatraTsara tarehy tora-pasika, ny rivo-piainana mafana sy ny manokana ny tontolo manintona ny maro holidaymakers. Raha toa ianao ka tia Tiorkia, izay te-jiro ho azy mandrakizay, tsy te-hahalala, how to get maha-olom-pirenena tiorka.
Mba hanaovana izany, dia misy fomba maro, fa izy ireo mitaky ny fampiharana ny tena toe-piainana: tiorka teny fahalalana, ny fisian'ny loharanom-bola be ho azy ireo, ny fitandremana ny tiorka ny lalàna sy ny fitsipika, ny aretina ary ny tsy, izany dia afaka mametraka ao hampidi-doza ny fahasalaman'ny olom-pirenena tiorka.
Ny voalohany sady tsotra indrindra dia ny hahazo ny zom-pirenena amin'ny taranaka. Raha iray, fara fahakeliny, ny ray aman-dreny dia ny olom-pirenena ao Tiorkia, ny zaza dia mahazo ny zom-pirenena avy hatrany.
Torkia ihany koa ny mahazo ny zom-pirenena ny zaza teraka na nolaniana araka ny olom-pirenena tiorka.
Olona avy any ivelany dia afaka mahazo ny zom-pirenena ao Tiorkia Minisitry ny firenena manokana, raha misy olona fanafarana ny indostria itambaram-be ao amin'ny repoblika, na raha toa ilay olona no nanao ny tena zava-dehibe ny fandraisana anjara amin'ny sehatra isan-karazany ny ny toe-karena. Hita ihany koa ao amin'ny toe-javatra ny maha-olom-pirenena, rehefa ny olona iray dia ny mpitsoa-ponenana. Afaka mahazo ny zom-pirenena nandritra ny dimy taonan'ny-ponenana ara-dalàna izany tao Tiorkia. Mba hanaovana izany, ny voalohany dia ny taona vitsivitsy miaina ara-dalàna ao amin'ny firenena, ny fandraisana ny fahazoan-dalana Torkia. Ny hampiasa vola ao ny hividianana ny an-trano na trano ao Torkia. Ny fividianana ny trano ao amin'ny firenena - toerana tsara ho haingana nahazo ny fahazoan-dalana honina, sy ny sy ny maha-olom-pirenena. Ara-dalàna ny asa na mihazakazaka ny raharaham-barotra. Fieken-keloka ho tiorka Ambony-Pampianarana. Ity fomba haingana indrindra Mamorona ny fianakaviana iray dia manome ny tsara ho vahiny ho fonenana fahazoan-dalana ho an'ny fe-potoana roa ambin'ny folo volana. Amin'ny faran'ny ity tahirin-kevitra ity dia mila manolotra izany ho an'ny hafa ny roa taona.
Avy eo dia afaka manomboka ny ho avy ny zom-pirenena
Ary izany no ny fandehany, mba hahazo pasipaoro ihany no mila ny telo taona, fa tsy dimy.
Na izany aza, ny olona avy any ivelany, izay te-hahazo ny zom-pirenena ao Tiorkia amin'izany fomba izany dia tokony mahalala ny manaraka izao: rehefa mieritreritra ny fahazoana ny zom-pirenena tahirin-kevitra ho an'ny taratasim-bola polisy imbetsaka ao anaty, sy ireo izay mitoetra ho fianakaviana.
Ny mpitandro filaminana hiditra an-trano na ny trano, mijery izany, ary koa ny fitondran-tena ny fanadihadiana eo amin'ny mpiara-monina, mba hanao, fa ho avy ny fanambadiana dia tsy sandoka.
Mba hividianana trano na trano ao Tiorkia, dia voalohany indrindra tsy maintsy hahazoana ny fahazoan-dalana honina nandritra ny enim-bolana, ary fa ny fividianana, dia mila manana kaonty amin'ny banky andrim-panjakana ny firenena Islamika ao ny vola tsy latsaky ny telo an'arivony dolara. Izany no ilaina mba hahazoana maro ny hetra ho an'ny fanjakana ny fitsarana. Izany dia natao ao fanolorana ny pasipaoro Efa vonona ny zavatra rehetra amin'ny taratasy efatra ireo sary sy ny pasipaoro dia mila mizara ny asa Fanompoana amin'ny fifindra-Monina.
Taorian'ny nametrahana nandritra ny Fotoana iray, ny olona mandray ny fahazoan-dalana honina.
Raha ny kaonty any amin'ny banky dia enina an'arivony dolara sy ny maro hafa, ny mpanolotra mandray ny fahazoan-dalana honina avy hatrany ny roa taona. Ny dingana manaraka ny fahazoana ny fizakana zom-pirenena amin'ny alalan'ny fividianana tany - dia ny fifantenana ny zavatra. Azonao an-tsaina fa ao an-trano, trano, fonosana, ary avy eo dia tokony hanao fifanekena ho an'ny fividianana, ny fifandraisana amin ny Tany Firaketana ny Birao. Rehefa afaka izany fotoana rehetra ireo antontan-taratasy nalefa tany amin'ny Ady Sampan-draharaha, izay izy ireo dia teny roa na dimy volana. Rehefa avy nanamarina tany ny olon-kafa dia omena ny taratasy fanamarinana ny zo hanana fananana manokana, ary izany dia manome tombotsoa maro, izany hoe: ny olona tsy dia tsy maintsy manavao ny fahazoan-dalana honina. Ary raha izany, raha toa izy ka dia hijanona ao Torkia nandritra ny dimy taona izy dia ho afaka ny hahazo ny zom-pirenena. Mba hahazo ny zom-pirenena ao Tiorkia, mba hanangona ary hampitaovana fiarovana toy izany: fanambarana pasipaoro, dia tsy maintsy ho nanorotoro ny fanamarinana ara-panjakana ny antontan-taratasy voamarina avy amin'ny dika mitovy amin'ny fahazoan-dalana honina anjara toerana lehibe teo amin'ny fotoam-piasany na ny tany Vaovao momba ny be dia be ny mpangataka ny fanambadiana taratasy na ny fandravana ny porofo ampy ny fizakana ny tiorka teny antontan-taratasy momba ny tsy fisian'ny aretina mampidi-doza kopia nahaterahana ao amin'ny habetsaky ny sary, ny loko roa pcs. Taratasy tokony ho nangonina ao amin'ny laha-tahiry roa: ny voalohany dia ny tany am-boalohany, ary ny faharoa dika mitovy.
Andininy faha-III: Bevy ny Zon'olombelona (Ny Lalàmpanorenan'ny Repoblikan'i Filipina) - Pejy roa telo
لگتا ہے کہ ایک بار پھر امریکہ